Detector vy vita amin'ny tanana
Ity dia mpitsongo vy azo entina tànana natao hamenoana ny tena takiana amin'ny sehatry ny fiarovana. Azo ampiasaina amin'ny fikarohana ny vatan'olombelona, ​​valizy ary mailaka amin'ny karazana vy sy fitaovam-piadiana. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fizahana fiarovana sy amin'ny fanaraha-maso amin'ny seranam-piaramanidina, fadin-tseranana, seranan-tsambo, fiantsonan'ny lalamby, fonja, vavahady manan-danja, indostria maivana ary karazana hetsika rehetra amin'ny besinimaro.
Detector mine mine UMD-III dia mpitrandraka harena ankibon'ny tany (miaramila tokana miasa). Izy io dia mampiasa teknolojia fampidirana am-polony avo lenta ary mora tohina, indrindra mety ho hitady toeram-pitrandrahana vy madinidinika. Tsotra ny fandidiana, noho izany aorian'ny fampiofanana fohy no azon'ireo mpandraharaha ampiasaina.
HW-LIS03 inspektur ranon-doza mampidi-doza dia fitaovana fanaraha-maso fiarovana ampiasaina hanaraha-maso ny fiarovana ny rano ao anaty kaontenera mihidy. Ity fitaovana ity dia afaka mamantatra haingana raha toa ilay ranoka nozahanaina fa an'ny entana mampidi-doza mirehitra sy mipoaka nefa tsy manokatra kaontenera. Ny fitaovana fanaraha-maso ranoka mampidi-doza HW-LIS03 dia tsy mitaky fandidiana sarotra, ary afaka mizaha ny fiarovana ny ranoka kendrena amin'ny alàlan'ny fitiliana ao anatin'ny indray mipi-maso fotsiny. Ny toetrany tsotra sy haingana dia mety indrindra amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana amin'ny toerana be olona na manan-danja, toy ny seranam-piaramanidina, gara, masoivohon'ny governemanta, ary fivorian'ny besinimaro
Ny fakantsary fikarohana IR teleskopika dia zavatra marobe, izay natao hijerena ny maso ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna sy ny entana an-tsokosoko any amin'ny faritra tsy azo idirana sy tsy hitan'ny olona toy ny varavarankely ambony rihana, tara-masoandro, eo ambanin'ny fiara, fantsom-pifandraisana, kaontenera sns. telescopic IR search Camera dia mipetaka amin'ny tsatokazo telescopic fibre mahery sy maivana. Ary hovana mainty sy fotsy ilay horonan-tsary amin'ny hazavana tena ambany amin'ny alàlan'ny hazavana IR.
HWXRY-01 dia rafitra fanaraha-maso fiarovana x-ray maivana, mora entina ary mandeha amin'ny bateria natao ho fiaraha-miasa miaraka amin'ny ekipa voalohany sy ny ekipa EOD hanomezana izay ilain'ny mpiasan'ny saha. HWXRY-01 dia mampiasa tontonana detection X-ray japoney tany am-boalohany sy hypersensitive misy 795 * 596 teboka. Ny famolavolana tontonana wedge dia ahafahan'ny mpandraharaha mampiditra ny sary ao anaty habaka voafetra raha ny habeny dia mety amin'ny fitiliana kitapo nilaozana sy fonosana mampiahiahy.
HW-24 dia mpitsikilo fihaonambe tsy mitongilana tsy manam-paharoa izay manamarika noho ny habeny, ny endrika ary ny lanjany ergonomika. Tena mifaninana amin'ny maodely malaza indrindra amin'ny detector tsy misy tsipika. Izy io dia afaka miasa amin'ny fomba mitohy sy pulse ihany koa, manana output output miovaova. Ny fisafidianana matetika matetika dia mamela ny fiasan'ny tontolo electromagnetic sarotra. Tsy mampaninona ny fahasalaman'ny mpandraharaha ny fivoahan'ny heriny. Ny fiasa amin'ny haavo avo kokoa dia mahatonga azy io amin'ny toe-javatra sasany mahomby kokoa noho ny mpamantatra manana alim-pandihizana mahazatra nefa misy fivoahan'ny herinaratra lehibe kokoa.
Rehefa miteny isika fa azo entina dia midika hoe mpitsikilo mavitrika tokoa izay afaka ampitaina haingana ao anatin'ny minitra fa tsy ora. Miaraka amin'ny mpandraharaha iray ihany, ny detecteur metaly HW-1313 dia azo apetraka ary hafindra amin'ny toerana rehetra ary hiarina sy hiasa ao anatin'ny dimy minitra! Miaraka amin'ny fe-potoana bateria mandritra ny 40 ora, lanja mitentina 35kg ary fikirakirana fitaterana olona tokana rehefa potraka, hanome anao hery mialoha ny vahaolana azo antoka ny detector.
Ity rafitry ny detecteur metaly ity dia mandray ny Frame Aluminium feno sy ny efijery fanaka LCD miharo volo tanteraka hanamarina raha misy zavatra vy miafina ao amin'ny vatana, toy ny metaly, basy, antsy voafehy sns. Ny fahatsapana farany dia mahatratra hatramin'ny vy ≥6g, miaraka amina rindrambaiko tsotra, mora kokoa amin'ny fametrahana sy fikojakojana.
Scanner X-Ray Portable, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Fitaratra fitiliana fiara, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Fakan-tsary fakan-tsary, Masinina scanner X-Ray azo entina,